Paul Alexander 69-sanadood ayuu sidaa u nool yahay balse ma malayn kartid heerka uu gaarey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Paul Alexander 69-sanadood ayuu sidaa u nool yahay balse ma malayn kartid...
Paul Alexander 69-sanadood ayuu sidaa u nool yahay balse ma malayn kartid heerka uu gaarey!
(Hadalsame) 06 Maarso 2021 – Paul Alexander waa mid ka mid ah dadka ka badbaaday cudurkii dabaysha ee 1950-kii ka qarxay Maraykanka, waxa uu naafo ka noqday inta ka hooseysa qoortiisa isagoo lix jir ah sanadkii 1952-KII.
69-sano ayuu mashiinkan la noolyahay, intaasi kama aysan joojin in uu nolosha la hardamo, waxbarto sidoo kalena uu shaqaysto.
1967-kii ayuu ka qalinjabiyay dugsigiisa sare isaga oo aan waligii xaadirin, Wuxuu is baray in uu xifdiyo inta uu Note qaadan lahaa, ka dib deeq waxbarasho ayuu helay, 1978-KII ayuu ka qalin jabiyay Kulliyadda Qaanuunka (degree of law), 1984 waxaa uu helay shaqo ah in dadka la baro eray cilmiyeedyada sharciga, 1986 waxaa loo dhaariyay in uu yahay lawyer buuxa hadda waa abuukaate leh kumanaan macaamiil.
2. Paul waxa noloshiisa u maceeyay waa in uusan isla barbardhigin dadka nicmada haysta ee wax dheer ee sida caadiga u neefsanaya, meel walbana lugohooda ku tagaya sidaas daraadeed cidna inaad isla barbardhigto ma ahan wax ku saxan caqli ahaan iyo diin ahaanba marka waligaa qofna ha isku miizaamin.
Xigasho: Ahmed Salad
Previous articleTurkiga oo samaynaya miiggii ugu horreeyey ee bilaa duuliye ah
Next articleSAWIRRO: Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gobolka Soomaalida & Canfarta + Shacabka oo gurmad bilaabay